Global Voices teny Malagasy · 10 Aogositra 2018
10 Aogositra 2018
Tantara tamin'ny 10 Aogositra 2018
"...misy andraikitr'ireo vondrom-piarahamonina, ireo fikambanana, ary ireo olom-pirenena mazoto ny fikarakarana, fanapariahana sy fitahirizana io lova tsy takatry ny saina nentin'ireo vahoakanay teratany io.."
Nahoana isika no manangana Vaomieram-piarahamonina
Nahoana isika no manao izany? Inona no dikan'izany? Ary ahoana no fomba fiasan'izany?
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 10 Aogositra 2018
Kambodza 10 Aogositra 2018
Ny 30 martsa 2009, natombok' ireo Fitsaràna Manokana ao amin'ny Tribonaly an'i Kambodza misahana ny Fitsaràna an'ireo Heloka bevava natao nandritra ny vanim-potoanan'ny Kampuchea Demokratika, na ECCC ny fihainoana voalohany an'i Kaing Guek Eav, fantatra amin'ny anarana hoe Douch.
Antsafa 10 Aogositra 2018
[Rakipeo] Cristina Quisbert manoritsoritra ny maha-zava-dehibe ny Voces Bolivianas
Ato amin'ity rakipeo maharitra telo minitra noraketina niaraka tamin'i Cristina Quisbert ity fony izy tany Miami nanatrika ny fivoriana ho an'ny We Media fanao isan-taona dia ho hitantsika ny maha-zava-dehibe ny Voces Bolivianas sy ny fampitam-baovaon'olon-tsotra amin'ny ankapobeny ho an'ireo mponina ao El Alto, Bolivia.